वर्षका आकर्षक १० पुरुष ! « Pariwartan Khabar
वर्षका आकर्षक १० पुरुष !
15 February, 2018 1:12 pm
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रले पाएको नवप्रतिभा हुन्—बुद्ध लामा । गत असोजमा नेपालको लोकप्रिय रियालीटी शो नेपाल आइडलको उपाधि जितेपछि सेलिब्रेटी भएका पोखराका बुद्ध अहिले धेरैको रोजाइमा पर्ने गायक हुन् । २० वर्षीय लामा त्यसअघि पोखरामा सञ्चालित ‘विग आइकन’मा चौथो भएका थिए । प्लस टु अध्ययनरत बुद्ध संगीतका विद्यार्थी समेत हुन् । अहिले उनका प्रशंसकको संख्या ठूलै भैसकेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल टेलिभिजनमा ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम चलाउँथे रवि लामिछाने । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उनी उक्त कार्यक्रमबाट हटाइए । अहिले उनले न्युज—२४ मा कार्यक्रम ‘जनतासँग सिधा कुरा’ चलाइरहेका छन् । आफ्नो कार्यक्रममा पीडित पक्ष र सरोकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा उपस्थित गराएर फरक धार र स्वाद दिन खोजेका कारण उनी लोकप्रिय हुँदैं गएका छन् । सन् २०१३ मा उनले लगातार ६० घण्टाभन्दा बढी टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चलाएर विश्व कीर्तिमान समेत बनाएका थिए । भनि कान्तिपुर साप्ताहिकले छापेको छ ।